PressReader - Kwayedza: 2017-06-23 - SHATO DZODYA SADZA . . . rematicha pachikoro nemumisha
SHATO DZODYA SADZA . . . rematicha pachikoro nemumisha
Kwayedza - 2017-06-23 - Tsika Nemagariro - Kingstone Mapupu naOwen Madondo
PANE mazinyoka mana — ehe 4 — ayo akakura zvekuti anogona kumedza kana munhu ari kuonekwa pedyo nezvikoro zviviri zviri kwaRusape apo anenge achiita mashura ekufamba akarumana miswe achinosvika pazvikoro izvi apo anodya sadza nemabhonzo zvinenge zvaasiiwa nevanhu.
Vagari vekwaRukweza, pasi paMambo Makoni vave kugara vakabatira hana mumawoko vachitya mikweshwa kana kuti misvesvenenga yeshato ina idzi, idzo dzinoonekwa masikati machena uye hadzitye vanhu.
Mazinyoka aya anogara pachuru chiri pedyo nezvikoro zviviri — Rukweza Primary neRukweza Secondary — izvo zviri panzvimbo imwe chete asi zvakangoganurwa nerwizi.
Mumwe mugari weko, Knowledge Kundidzora (19) wepamusha waMbiriri uyo uri pedyo nepachuru panobuda mazinyoka aya anoti zvikara izvi zvinobuda mumaziguru nguva dzakafanana — kuma9 nekuma10 dzemangwanani, kuma1 kana 2 dzemasikati nekuma4 dzezuva rodoka.
“Kubva pamba pandinogara kusvika pachuru chinobuda nyoka idzi panongova nechinhambwe chemamita zana. Vanhu vanotomukira kubva kudzimba dzavo vachizodziona padzinobuda, dzovandarira zuva uye hadzitye kana kuruma vanhu.
“Dambudziko riri pakuti dzinozotsvaga chikafu — sadza nemabhonzo mumaraini — kunyanya kudzimba dzematicha. Sepamba yatakavambirana nayo, KUNZE kunotarisirwa kunge kuine makore pamwe nemwando kuchitonhora munyika yose.
Kuchange kuine makore, kuchitonhora pamwe nemhepo uye zuva pano neapo kumatunhu ose enyika.
Veruzhinji vanoyambirwa kuti dzinosvikapo dzichidya sadza nemakoko mugomba remarara,” anodaro Knowledge.
Diki yenyoka ina idzi inonzi yakareba mamita angadarika matatu asi hombe yacho ichidarika mamita mashanu kana matanhatu.
Nyoka idzi dziri kugara pachuru chakadziva pachikoro cheRukweza Primary uye dzimwe nguva dzinonzi dzinoyambuka rwizi rwaMutorahuku kuenda kuchikoro cheRukweza Secondary, uko dzinonotsvaga chikafu dzichidzoka.
Dzinonzizve dzinonwa mvura murwizi urwu dzisati dzayambuka.
Masikati emusi weChina svondo rapera, Kwayedza yakaona rimwe remazinyoka aya riri pachuru mane mazimwena kana kuti maguru apo papfumbira nekutsokodzerwa nezvikara izvi pamwe chete nevanhu vanombonodziona.
Vamwe vagari vepamusha wakavambirana nechikoro cheRukweza Primary vanoti vaoneswa nhamo nenyoka idzi, idzo dzavanoti dzinoenda pagomba ravanorasira marara apo dzinonodya zvavanorasirapo sesadza nemabhonzo.
“Nyoka idzi dzinonyanya kuenda pamusha waMbuya Mukombiwa apo panoroja vana vechikoro dzonodya chikafu chinoraswa mugomba. Pamwe pacho dzinorwira chikafu, mukazviona munotya imi,” anodaro mumwe murume uyo akakumbirisa kuti asadurwe zita rake nekutya sezvo achiti zviri kuitika izvi zvine vapfeke zvinodziya nguva dzose kuitira kudzivirira chando icho chinogona kukonzera kukosora pamwe nechirwere chedziwa.
Mbaura dzinofanira kushandiswa zvine hungwaru nedonzvo rekudzivirira njodzi yekukachidzwa nehutsi hwecarbon monoxide izvo zvinogona kukonzera rufu.
Imwe yeshato ina dzinonzi dziri kudya sadza kudzimba dzevanhu kwaRukweza.
Mbuya Agnes Mukombiwa Amon Putseni